Horgale Cali Khalif Galaydh Oo Soo Gaadhay Dubaay | RUUG-CADDAA
Hadaba sida aanu ku helayno xogaha hoose, waxaa markan u yeedhay kooxda fashilka ah Muuse handaraab, oo doonaya Labo ujeedo oo kala ah:
In loo Adeegsado sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa buuhoodle, oo waayadanba laga shaqaynaya shirqoolkaasi.
Labo in ay isku habaystaan maleeshiyaad beeleedka taabacsan maamulka fashilka ah ee Muuse handaraab, ka dibna ay difaac ka galaan aagga Tukaraq.
Hadaba Horgale Galaydh oo hada ku sugan dubaay wuxuu doonayaa inuu quudareeyo waxa ay isaga iyo midhadhka taabacsani ay kaga dhex hadaaqaan goobaha kulamadu ka dhacaan, waa saami qaybsi ku sheege, balse dadkan ay doonayaan inay huuhaadaasi ka iibiyaan way ogyihiin in aysan suurtagal inay dastuurkooda u jebiyaan midhadh ah baadi irmaan….
Wixii xog ah naga suga….
« Dowlada Soomaaliya oo Ansixisay Qorshaha Tababarada Turkiga ay Ka wadaan soomaaliya
Fasiraad ku aadan waxa salka ay ku heyso xiisadda diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya »